PROJEKT PROMETEY folyékony kőolajtermékek előállítása hulladékokból és ásványi anyagokból
"Klimov Design Bureau" - PROMETEY zvinyorwa zvekugadzirwa kwemafuta emvura kubva kumarudzi akasiyana-siyana ezvigadzirwa nemarara
Isu tinopa chechizvarwa chechitatu marara anodzokorora zvidyarwa: hapana hutsi, hapana chinobuda.
Zvigadzirwa zvekupedzisira pakubuda: yakachena isina kunyungudutswa mvura uye isina chakaipa kabhoni dhibhoni.
Mamiriro ezvinhu anodiwa ekukura kwezvirimwa. Dzokorora kwako kwaunogara - HWEMWARI.
Vhidhiyo photo gallery
Kunyorwa kwekuratidzwa kwemarara ekurapa
Wana gelisi, mafuta uye gesi kuti upiwe motokari dzako mumagetsi ekutanga PROMETHEUS weKlimov Design Bureau. Kubva pane zvakasvibirira zvipembenene: masisita emaspala, malahle, peat, matanda matanda. Kubva pamvura yakasvibirira: mafuta, mafuta emafuta, sludge, mafuta. Yedu mini inosvina mabhoti matsva zana: kutsvaga vatengesi munyika dzose dzepasi. Ita kuti pasi rako rive rakachena uye iwe pachako ubudirire
Tinocherechedza: waste pyrolysis michero, zvakasiyana-siyana zvinomwiwa mvura evaporation mashizha, zvinokonzerwa nemafuta anonzi sorption units, mafuta anonyanya kuvhara mafuta, incinerators, vacuum distillation units, vashandi vemvura yegungwa.
PROJEKT "PROMETEY" - folyékony kőolajtermékek előállítása hulladékokból és ásványi anyagokból
Mishonga yegadziriro yakakwana yemiti yekushandura tsvina mumagetsi nemafuta zvinorongwa nehofisi yeklasi yeKlimov
Nzira yekugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa nehuwandu hwekugadzirisa dhaka kusvika mumafuta
Kugadzirwa kwemhando dzakasiyana-siyana dzezvinhu zvakasikwa pazvirimwa zveKlimov zvepasi rose
PYROLYSIS INSTALLATIONS AND PLANTS WORKING PLANTS
Kusungirirwa kwepurorosesis tsvina FERMER
Mamiriro ekuderedza zvinhu zvinoshandiswazve mumiti PROMETEY-FARMER
Mifananidzo yemichindwe yemiti CHIKAMU-CHIKAMU uye kuongorora waste pyrolysis complexes
ZVINONYANYA KLIMOV'S - ROBOTS YOKUDZIDZWA KWEMAPARYGONI DUSTY
Zvinyorwa gasifiers waste ECO-FARMER